चोरसँग पत्रकारको परिचयपत्र, लकडाउनको मौका छोपर होस्टलका सामान चोरी ! – tshorolpa
Home/समाचार/चोरसँग पत्रकारको परिचयपत्र, लकडाउनको मौका छोपर होस्टलका सामान चोरी !
News ७ जेष्ठ २०७७, बुधबार ०८:२८
जेठ,काठमाण्डौ – लकडाउनको समयमा मौका छोपर होस्टलमा रहेको सामान चोरी गरिरहेका अवस्थामा एकजना काठमाण्डौमा पक्राउ परेका छन्।
सिनामंगल रहेको आरेर ५१ ब्याएज होस्टलबाट ४ थान ल्यापटप भत्केको पुलबाट ल्यापटप आइप्याड चोरी गर्ने बारा जिल्लाका अली आलम मिया र सुनसरी इटहरीका हिमाल रसाईली पक्राउ परेका छन् महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुले जनाएको छ ।
अलि आलम मिया र हिमाल रसाईली उनीहरुको साथबाट ल्यापटप, आइप्याड, ५३ हजार रुपैयाँ नगद , तिन ३ सय अमेरिकी डलर र धारिलो हतियार सहित बरामद गरेको टेकु प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरुले साथमा एक टेलिभिजनको प्रेस कार्ड देखाएर उम्कन खोजेका तर उक्त परिचयपत्र नक्कली रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
“मकैको विउ वितरण कार्यक्रम”सफलतापूर्वक सम्पन्न
३ चैत्र २०७७, मंगलवार २०:१२
पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस
३ फाल्गुन २०७६, शनिबार ०४:०५